လက်စားချေခြင်း ဆိုတာ - YOYARLAY Digital Media and News
လက်စားချေခြင်းဟာ တကယ့်ကို ကောင်းတဲ့အရာပါ
သင်အနေနဲ့ ဒီအဆိုကို လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင် သိပ္ပံပညာအရ ကျေနပ်လောက်ဖွယ် ဖြေရှင်းချက်တွေ ရှိနေတယ်ဆိုတာ သတိပြုစေချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလိုအမြင်က ရေရှည်မှာ အဆင်ပြေနိုင်ပါ့မလား? အဆင့် (၆) ရှိတဲ့ သိပ္ပံပြပွဲတစ်ခုအတွက် ဆွဲထားတဲ့ အစီအစဉ်ကောင်းတစ်ခုကို သင့်သူငယ်ချင်း မေရီ ( Mary ) သိအောင် ပြောပြထားမိတယ် ဆိုပါတော့။ ရေထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ ညစ်ညမ်းပစ္စည်း ပါဝင်မှုနှုန်း တိုင်းတာခြင်းဆိုင်ရာ လက်တွေ့စမ်းသပ်ချက် (မေရီသိရှိပြီးသား) ကို သင် တင်ပြချိန်မှာ ဆရာက ဒါ မေရီ (Mary) လုပ်ပြပြီးသား လို့ ပြောတဲ့အချိန်….သင်ဘာလုပ်မလဲ? သင့်ဦးနှောက်က မေရီ့ (Mary) လက်စားချေဖို့ အချက်ပေးခေါင်းလောင်း တီးနေလောက်ပါပြီ။
တကယ်လို့ သင်က မေရီ့Mary နေရာမှာ သူ့လိုပဲ ပြုမူမယ်ဆိုရင်ရော ကောင်းနိုင်မလား။ လေ့လာမှု တစ်ခုကနေ ဖော်ပြတာတော့ လူရဲ့ စိတ်ကျေနပ်မှုဟာ အကြမ်းဖက်စံနှုန်းတွေကနေ လာပါသတဲ့။ Personality and Social Psychology ဆိုတဲ့ ဂျာနယ်မှာ ဖော်ပြချက်အရ မတရားသဖြင့် ခံခဲ့ရတယ်လို့ ခံစားနေတဲ့ လူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ စိတ်အမှောင်ခြမ်းကို ဘယ်နည်းနဲ့မဆို ပိုပြီးမြှင့်တင်ဖို့ မဖြစ်မနေ လိုအပ်ပါတယ်တဲ့။ ပြင်းပြတဲ့ လက်စားချေမှုတွေကို လိုအပ်လာတဲ့အချိန်မှာ Vodoooo doll (အောက်လမ်းပညာနဲ့ စီရင်ထားတဲ့ ပုံတူရုပ်) တွေကို အပ်နဲ့ထိုးတဲ့ကိစ္စဆိုတာမျိုးတွေ ဖြစ်လာကြတော့တာပါပဲ။ ခန့်မှန်းကြည့်ပါ.. အဲဒီလိုလုပ်လိုက်တာက စိတ်များပြေသွားစေသလား လို့။
ဒါဟာ လူတွေအတွက် အနိုင်ရချင်တဲ့ ခံစားချက်ကို လက်လွှတ်လိုက်ဖို့ ဘာလို့ ခဲယဉ်းနေရတယ် ဆိုတဲ့ သဘောထားကွဲလွဲမှုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလေ့လာမှုတွေကို ရေရှည်စိတ်ချမ်းသာ ပျော်ရွှင်မှုအတွက် ထည့်သွင်းစဉ်းစားလို့တော့ မရပါဘူး။ လေ့လာမှု တော်တော်များများကလည်း ကနဦး စိတ်ကျေနပ်မှုဆိုတာဟာ တည်မြဲမနေနိုင်ဘူး လို့ ဆိုထားပါတယ်။ အဆိုးဆုံးနည်း နဲ့ လက်စားချေလိုက်ရတာတောင်မှပဲ စိတ်ထဲမှာ အကျိတ်အခဲ ဖြစ်ကျန်နေဆဲပါ တဲ့။
လက်စားချေရတာက ချိုမြိန်တယ် ဆိုတဲ့ အချက်တွေကလည်း ရှိပါတယ်။ လက်စားချေခြင်းခံရတဲ့လူတွေက သူတို့ဘာကြောင့် ခုလိုပြန်ခံရတယ်၊ သူတို့ဟာ ပြန်ပြီးလက်စားချေခံရဖို့ ထိုက်တန်တယ် ဆိုတာတွေကို သိသွားကြမယ်ဆိုရင်တော့ လက်စားချေရခြင်းဟာ တကယ့်ကို ချိုမြိန်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်စားချေလိုက်သူ တစ်ယောက်ဘက်က ကြည့်မယ်ဆိုရင် လက်စားချေခံရသူတစ်ယောက်အပေါ် အသိအမြင်တစ်ခု ပေးနိုင်လိုက်တယ်၊ သူ့အမှားကိုသူ သိသွားစေခဲ့တယ် ဆိုရင် ဒါက ချိုမြိန်တာထက် သာလွန်သွားပါပြီ။ တစ်ဘက်လူကို ဘယ်လိုအတွေးအမြင်မျိုးမှ ပြန်ရမသွားစေခဲ့ဘူး ဆိုရင်တော့ လက်စားချေခြင်းဟာ တရားမျှတတယ် လို့ ဆိုနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
မတရားသဖြင့် ခံလိုက်ရသူ တစ်ယောက်အနေနဲ့ လက်စားချေချင်စိတ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဟာ အမှန်တရားကို ထိန်းညှိလိုတာ ဖြစ်တယ်လို့ သဘောပေါက်ပေးရပါမယ်။ စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်တွေကတော့ လက်စားချေခြင်းထက်ပိုပြီး သင့်တော်မယ့် ကောင်းမွန်တဲ့ စိတ်ပိုင်းဖြတ်မှုတွေ ထားရှိတာ၊ ဒေါသတရားတွေကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အောင်မြင်မှု အဖြစ်ပြောင်းလဲတာ၊ တရားထိုင်တာ၊ ဒါမှမဟုတ် အသက်ပုံမှန်ရှူရင်း စိတ်ငြိမ်စေတာ စတဲ့ (Outlets) စိတ်ထွက်ပေါက်တွေကိုပဲ ရှာဖွေသင့်တယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ ဒါဆိုရင် မေရီ(Mary) ရဲ့လက်တွေ့စမ်းသပ်ချက် လိုမျိုးကိစ္စ တွေဟာ တစ်နည်းနည်းနဲ့ ပပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါကြောင်း…
Previous Previous post: အပြင်လောကကိုပါ ရိုက်ခတ်မှုများစွာ ဖြစ်စေတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများ
Next Next post: အာရှနိုင်ငံ ၈ နိုင်ငံမှာ တယ်လီနောအင်တာနက်ကို ပြည်တွင်းနှုန်းထားအတိုင်း အသုံးပြုနိုင်ပြီ